ဘယ်တော့မှ………………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ဘယ်တော့မှ…………………
Posted by alinsett on Jul 17, 2012 in Myanmar Gazette, Short Story | 17 comments
အလင်းဆက် ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတို ၁၈ နှစ်တုန်းက ရေးထားတဲ့ ရသ၀တ္ထုတို
” ခင်ခင်သေပြီ….။ သီတာက မသေမချင်း..ဓါးနဲ့ ထိုး သတ်လိုက်တာ….တဲ့ ”
အဲင်္ဒိ သတင်းကို ကြာရစဉ်ကတည်းက…တစ်ခုခုတော့ပုံဆိုးပန်းဆိုး မှားယွင်းနေခဲ့ပြီ…ဟု ကျွန်တော် သိလိုက်ပါသည် ။
ခင်ခင် နှင့်ကျွန်တော်…လက် ထပ် ရန် တစ်လ..သာ လိုတော့သော…ဤ အချိန်မျိုးမှာ…..မှ…. သီတာ ..ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်ရသလဲ..။
ခင်ခင့် မှာ..ဘာ အပြစ်ရှိသလဲ…။
ခင်ခင့်ကို လက်ထပ်ဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သူများထဲမှာ…သီတာက ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်နေခဲ့သည်..ပဲ..။
ကျွန်တော့် ဖေဖေနှင့် မေမေက ကျွန်တော်..” ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကို ရွေး..” ဟု ဆိုကာ….
ဓါတ်ပုံများကို ကြည့်ရှု စေခဲ့သည် ။
ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းမလေး..သီတာ့ ကို ” ငါ နဲ့ လက်ထပ်ရမယ့် မိန်းမ ကို နင်ပဲ..ရွေးပေးကြည့်စမ်းပါ…”
ဟု… ပြောပြီး..ရွေး ခိုင်းမိ ခဲ့သည် ။
ကံတရား ၏ ဆန်းကြယ်မှု ဖြင့်… ထိုဓါတ်ပုံများထဲတွင်…
သီတာ နှင့် အလွန် ရင်းနှီး ခင်မင်ခဲ့သော..ခင်ခင်လည်း…ပါဝင်နေခဲ့သည်..။
” ခင်ခင် နဲ့လက်ထပ် သင့်တယ်..”
ဟုပြောပြီး… ရွေးပေးခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်…. လေ့လာ အကဲ..ခတ်ကြည့်..သော အခါမှာလည်း..ခင်ခင့်ကို
လက်တွဲ သင့်သော မိန်းမ တစ်ယောက် ဟု..သတ်မှတ် ခဲ့ရပါသည် ။
ခုတော့…… သီတာ ..ရယ်… ။ နင်ကိုယ်တိုင် ရွေးပေးခဲ့တဲ့ခင်ခင့်ကို နင်ကိုယ်တိုင်ပဲ……… သတ် ပစ်တယ်…။
ကျွန်တော် ..သီတာ နှင့်..ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း..စကားပြော ဖို့ ..လိုနေပြီ…။
အချုပ်ခန်း ၏ သံ တိုင် တွေ..အနောက်မှာ…
ငြိမ် သက်စွာ..ထိုင်နေသော သီတာ့ကို မြင်တော့..ကျွန်တော်..ရင်ထဲက စူးနင့် နာကျင်သွားးပါသည် ။
ကြည့်စမ်း…. ဒီလောက် နုနယ် သိမ်မွေ့ တဲ့ မိန်းကလေးက….. လူတစ်ယောက်ကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်ပစ်လိုက်တယ်..တဲ့။
အဲဒီ ..အပြစ် ဒဏ်ကို ..သူ…နှစ်ပေါင်း များ..စွာ…ခံ ရတော့မည်..။
နင်ဟာ…ငါ့ သူငယ်ချင်း.သီတာ မှ…ဟုတ်သေးရဲ့ လား..။ ဘာကြောင့်များ..ဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ ပြစ်မှုကြီးကို
ကျွန်တော် နှင့် သီတာကို စကားပြောခွင့်ပြုသောအခါ….
ကျွန်တော်..သိချင် လွန်းသော…မေးခွန်းကို… မေးလိုက်ပါသည် ။
” သီတာ…နင်… ဘာလို့ ..ခင်ခင့်ကို……”
” နေဦး…ကိုလင်း….။ နင် မမေးနဲ့ ဦး..။ ငါ..အရင် မေးပါရစေဦး..။
ရုတ်တရက် ..သီတာက ဖြတ်မေးလိုက်တော့….။ ကိစ္စ မရှိပါ .။ ထိုမေးခွန်း ကို ဖြေဖို့ကျွန်တော့်မှာ..အဖြေ
အဆင်သင့် ရှိပါသည် ။
‘ ဟေ့ အေး…မချစ် ဘူး ။ လက်ထပ် ဖို့သင့်တော်တယ်..ထင်လို့ သာ…။ ပြီးတော့…နင် ..ရွေးပေးတာလေ..။”
” ဟုတ်ပြီ….။ ဒါဆို…နင် ..ခင်ခင်သေသွားလို့ လည်း…ကြေကြေကွဲကွဲ ခံစားမနေရဘူးပေါ့နော် ။
ငါက…နင်..အရမ်း ခံစားနေရမှာ..စိုးလို့ ပါ..ကိုလင်းရယ်…”
” ထားပါတော့…။ နင်..ခင်ခင့်ကို..ဘာလို့သတ်တာလဲ…သီတာ..”
ကျွန်တော့် မေးခွန်း… အဆုံးတွင်…
သီတာ..ခေါင်းငုံ့ငြိမ် သက်…၊ သီတာ့မျက်ရည်များက…. တစ်စက်ချင်း..လိမ့်…ဆင်း…၊ တစ်လောက လုံး..မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်…
သီတာက အေးစက် မာကျောသော……လေသံဖြင့်….ပြန်..ဖြေခဲ့သည် ။
” … ငါ…. မပြောဘူး … ”
ကျွန်တော် .. ဘယ်လိုမေးမေး… သီတာက ခေါင်းခါ နေခဲ့သည်။
” ငါ..ပြောလိုက်လို့ လည်း…. ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိပါဘူး…ကိုလင်း.ရယ်..”
နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာကို ပွေ့ ပိုက်ပြီး…. လာရာ လမ်းကို လှည့် ပြန်ခဲ့ရ သည့်…ညနေခင်း ဖြစ်သည် ။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ နည်းဗျူဟာ ပြောင်းပြီး..မေးရပါသည် ။
သီတာက..မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှု မျိုးကို မဆို..ကြောက်ရွံ့ တတ်သူလေး.ဖြစ်သည်..ပဲ.။
” သီတာ … နင်… ခင်ခင့်ကို ဘာလို့သတ်တာလဲ…။ နင် မဖြေရင်..ငါ့ ကိုယ် ..ငါ….သတ်.သေ လိုက်မှာနော်..။”
သီတာက..မဖြုံသေးပါ ။ကျွန်တော်..ဆိုသည့်ကောင်က…. ကိုယ့်ကိုယ် ကို သတ်သေ လိုက်ဖို့ အထိ စိတ်ဓါတ် မပျော့ ညံ့ ကြောင်း…သီတာ သိထားသည် ။
” ငါ့နေရာကနေ…နင်တွေးကြည့်စမ်းပါ..သီတာ..။ လက်ထပ်ပွဲ က တစ်လ ပဲ..လိုတော့တဲ့ အချိန်မှာ..ငါ လက်ထပ်မယ့်..သူတို့ သမီးလောင်းက..အသတ်ခံရတယ် ။
ပြီးတော့……ငါ့ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းက…သတ်တာ ။ သူငယ်ချင်းကလည်း…လူသတ်မှု နဲ့ ထောင်ကျတော့မယ်..။
ဒီလောက မှာ…ငါ…ဘယ်လို နေရတော့မလဲ..။ ငါ .. သေချင်လောက်အောင်..စိတ် ညစ်နေပြီ…သီတာရဲ့။”
သီတာ….ကျွန်တော့်ကို ခေါင်း မေ့ာကြည့်သည် ။
” ငါ့ကို..ရှင်း ပြပါ သီတာ…။ ငါ… စိတ်တွေ..ရှင်းလင်းသွားချင်လို့ ပါ ။ ပြီးတော့ နင့်ကို လည်း..ငါ
အားပေးစကားတွေ ပြောချင်ပါတယ် ။
ငါ့ကိုလည်း..နင်..အားပေးစကားပြောပါ..။ နင့်ကို လည်း..ငါ…. စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ….ခွင့်လွှတ်
အမှန်တကယ်ပင်…ကျွန်တော့် စိတ်တွေ..လေးလံ…ရှုပ်ထွေးနေပါသည် ။
သီတာ.. သက်ပြင်း ချသည် ။ ထို့ နောက်..ခေါင်း ခါသည် ။ ထို့ နောက်..ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်သည်။ ပြီး..မှ…
စ ..ပြောပါသည် ။
” အေးလေ….။ ငါ…..ပြောမယ်…။ ”
ကျွန်တော် …လုံးဝ မမျှော်လင့်ခဲ့သော…စကားများကို…
ငါ….ခင်ခင့်ကို မုန်းလို့သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး….ကိုလင်းရယ်..။
ခင်ခင်ဟာ..ငါ သိပ် ခင်မင်ရတဲ့သူပါ ။ သူနဲ့ငါက..စာဖတ် ၀ါသနာ ပါတာချင်းတောင်…တူနေသေးတယ် ။
ငါတို့ … စာအုပ်တွေ အကြောင်း.ပြောကြရင်း ….နဲ့ပိုပြီး… ရင်းနှီး သါားကြတာ..ဟ ။ သူနဲ့ ငါ. အကြာကြီ; .ခင်မင်ခဲ့တယ် ။
နောက်တော့…ငါတို့ …. မထင်မှတ်ပဲ..အကြာကြီး…ဝေးကွားသွားတြာလေ….
ငါတို့ပြန်တွေ့ ကြတာဟာ…
နင်က ငါ့ကို ဓါတ်ပုံတွေ.ပြပြီး… ရွေးချယ် ခိုင်းတော့မှ….ပါ ။
ဒီတော့…ငါက အကြောင်း သိ ဖြစ်နေတဲ့ ..ခင်ခင့်ကို ပဲ..ရွေးပေးခဲ့တယ်..လေ ။
နင့်ကို ခင်ခင်နဲ့ ပဲ..ငါ စိတ်ချတယ် ။ ပြီးတော့ ခင်ခင့်ကို လည်း..နင်နဲ့ ပဲ..စိတ်ချတယ် ။
ဒါပေမယ့်…ဘာဖြစ်သလဲ…။ မျက်ရည်တွေ တ ..စက် စက်..ကျရင်း…. ပြောပြနေသော..သီတာ့ ကို ….
ဒါပေမယ့်..ခင်ခင်က ပြောင်းလဲသွားပြီလေ..။ တခြား အရာတွေ မပြောင်းလဲ.ပေမယ့်…
ခင်ခင့်ရဲ့ သွေး.တွေ..ကတော့….ပြောင်းလဲ.သွားခဲ့ပြိ..ဟ ။
ခင်ခင်နဲ့ ငါ…ဆေးရုံမှာ..သွေး.သွားးလှူကြပြီး…မှ.. သိလိုက်ရတာ..။
ခင်ခင် နဲ့ ငါ တွေ့ ပြီး.နောက်မှာ… စိတ်တူကိုယ်တု ပဲ…သွေး လှူ.ဖို့သွားခဲ့ကြတယ် .၊
ဆေးရုံမျာ… ငါတို့ သွေးတွေ..လှု ခဲ့တယ် ။
ငါ့ကို ဆေးရုံက ဖုန်း ဆက် ခေါ်..လို့ .. ငါ သွားရတယ် ။
ဆေးရုံေ၇ာက်တော့…. ဆရာဝန်ကြီးက…. ငါ့ကို ပြောပြတာ..ဟ ။
ခင်ခင့်မှာ..HIV ရှီနေတယ်..တဲ့။
အေး… ငါလည်း..မယုံနိုင်ဘူး။ သေချာ ရဲ့ လား..ဆ၇ာရယ်..လို့ တောင် အထပ်ထပ် မေးခဲ့ မိတယ် ။
ဆရာဝန်ကြိးက..လုံးဝ သေချာတယ်..တဲ့။ ခင်ခင့်ကို အသိပေးဖို့ ….
ဘယ်လို နည်းလမ်း သုံးရင် ကောင်းမလဲ..။ ခင်ခင့် ဘက်က…ဘယ်သူ့ ကို အရင် အသိပေးသင့်သလဲ..ငါ့ကို..ခေါ် တိုင်ပင်ကြည့်တာ..တဲ့။
ငါက…. ကျွန်မ ပဲ.. ပြန်ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်….လို့ ပြောခဲ့လိုက်တယ်..လေ ။
” အဲင်္ဒီတော့..နင်…ခင်ခင့်ကို ပြောပြလိုက်လား…သီတာ ..”
” မပြောပါဘူး .။ သူ့ မှာ..HIV ရှိနေတာ..ကို..သူ သိ ၊ မသိ တော့ စကား အစ်ကြည့်မိတယ် ။
သူ…မသိဘူး..။ ဒါပေမယ့်….ငါ..မပြော လိုက်ပါဘူး ။
ငါ..သတ်လို့ …သေရတော့မယ့်..သူ့ ကို…ပိုပြီး..မနာကျင် စေချင်ပါဘူးလေ..။
ငါ..သူ့ ကို သတ်လိုက်တယ် ။
ဓါး နဲ့ ကို…မသေမချင်း ထိုးပြီး..သတ်လိုက်တာ..။ ”
သီတာ ငို ချလိုက်သည် ။
” နင် မသတ်လည်း… HIV နဲ့သေရတော့မယ့် ခင်ခင့်ကို..
ဘာလို့ …ဓါးနဲ့ ထိုး သတ်တာလဲ…။ သီတာ..နင်……ရူးနေလား…..ဟမ်… ဘာလို့ …”
က။ွန်တော်..စိတ်လှုပ်ရှားစွာ…အော် ပစ်လိုက်ဆဲမှာပဲ… တစ်စုံတစ်ရာကို.. ..ရိပ်မိသွားသည် ။
” သီတာ….နင်.. ။ နင်….ငါ့ အတွက်…..”
” ဟုတ်တယ်…..။ ဟုတ်တယ်…ကိုလင်းရဲ့ ..။ ငါ.ရူးနေပြီ..။
နင့်ကို အဲဒီ ရောဂါ ပိုး…ကူမှာ စိုးလို့ ပါ..။
နင်..ခင်ခင် နဲ့ယူပြိးတာနဲ့ ….HIV ကူးသွားမှာ..စိုးလို့ ပါ…
ငါ…နင့်ကို အဆုံးရှုး မခံနိုင်လို့ ပါ…..ကိုလင်းရဲ့ …။
ငါက..ငါက..နင့်ကို ….ချစ်နေရတဲ့ သူလေ…..
နင့်ကို ခင်ခင့် လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရတာတောင်..ငါ အရမ်း နာကျင်ခဲ့ရတာ..။
နင်…သေသွားတဲ့ အထိတော့..ငါ အဆုံးရှုံး မခံနိုင်လုိ့ ပါ….ဟာ….. ”
ငိုရင်.း…ပေါက်ကွဲ….အော်ဟစ်နေသော…. သီတာ့ ကို ကြည့်ကာ….
ကျွန်တော် ထိတ်လန့်အံသြ….နေမ်ိသည် ။
သီတာရယ်…..ငါ…ဘာပြောရမလဲ..။ ငါ..အခု ပြောရမလား…..။………..ငါလေ….ငါ…။
သီတာက သူ့ ကိုယ် သူ ပြန် ထိန်းယူ၇င်း……
” ဆောရီး..ကိုလင်း .ရယ်…. ငါ…ဘာတွေ…ပြောမိ သွားပါလိမ့် …”
” သီတာ….နင်…. .နင် ဟာ…….။
ငါ့ အတွက်နဲ့အဲဒီလောက်ထိ…လုပ်ရသလား….။ ငါ…
သီတာက… မဲ့ ပြုံး.တစ်ချက်ပြုံးရင်း…..
“.. ကိစ္စ မရှိပါဘူး..ကိုလင်း….။ ငါက နင့်အတွက်…အသက်ရှင်နေတဲ့ သူ ပါ ။
နင့် အသက် အတွက်… ငါ့အသက်ကိုတောင် ကြား ၀င် စတေး ရဲပါတယ် ။
အဲဒီ အတွက် ခွန်အားတွေကို…. အချစ်က ပေးတယ်လေ..။
ကဲ.. နင် ငါ့ကို အချစ်ရူးမ….လို့ပြောဦးမလား… ”
” သီတာ…ရာ…. ငါ…. ငါ..နင့်ကို….”
” မပြောနဲ့ … ။ မပြောပါနဲ့ကိုလင်း…ရယ်..။
နင်..ငါ့ကို…. ခင်..သလား… ။ ချစ်သလား…။
သံယောဇဉ်ရှိသလား… ။ ဒါမှ မဟုတ်..မုန်းသလား..။ နားကျည်းသလား……ငါ့ကို…. ဘာမှ မပြောပါနဲ့။
ငါ…မကြား ရဲ လို့ ပါ ဟယ်….။ ငါလေ…
ငါ့ အထင်နဲ့ ပဲ..ငါနေပါရစေ..။
ငါ့ အထင်ထဲမှာတော့လေ…..နင်က ငါ့ကို သိပ်….ချစ်တာ…. ဟ…။
ငါ..အဲဒီ အထင်လေးနဲ့ ပဲ..နေပါရစေ.နော် ။
နင်..တစ်ခုခု သတ်မှတ်..လိုက်မှာကို..ငါ….မကြား ရဲ ဘူးလေ..ဟာ…။
တစ်ခု ပဲ..။ တစ်ခု ပဲ..ငါ တောင်းဆိုပါရစေ… ကိုလင်း…
နင်…ငါ့ကို မမုန်းလိုက်ပါနဲ့ …..နော် ..။
နင်..ငါ့ကို မုန်းလိုက်တာနဲ့ …. ငါ..သေသွားမလား.. တကယ် ရူးသွားမလား..ပဲ….
ကဲ..ပါလေ… နင်…ပြန်တော့ ..ဟာ…။။။။ ”
သီတာ…ရာ…….။ ကျွန်တော်…. ဟိုတုန်းကတည်းက..ပြောချင်ခဲ့ပြီး…
ပြောခွင့် မရခဲ့သော..( အကြောင်းကြောင်း..တို့ ကြောင့် ..ပြောခွင့် လွဲချော်ခဲ့ရသော ) စကားတစ်ခွန်း….
ဒီ တစ်ကြိမ်လည်း…… လွဲချော်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ…။
ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ….. ပြောမပြ တတ်အောင် နာကျင်လွန်းသည့် ဒဏ်ရာ တစ်ခု….ရှိနေဆဲ….။
သီတာ့ဆီမှာရော….
သေချာပါသည်…..။ သီတာ့ ရင်ထဲ မှာလည်း……
ကျွန်တော့် ဘ၀ထဲကို..အချစ် ဆိုသော အရာက
လှပ သိမ်မွေ့ စွာ….၀င်မလာခဲ့ပါ ။
ဒဏ်ရာ တစ်ခု အဖြစ်သာ …နာကျင်စွာ… နင်း … ဖြတ် ၀င်ေ၇ာက် လာခဲ့သည် ။
ဘယ်အရာ..၊ ဘယ် သူ့ကို နာကျည်းရမှန်း….မသိဘဲ…
အချစ် ဆိုသော အရာသည်……ကျွန်တော့်ကို တစ်သက်တာလုံး….နာကျင်စေတော့မည်..။
အချစ်ဆိုတာ… လက်သည်းချွန်တွေ သိပ်များတဲ့ …..စုန်းတစ်ကောင် လိုပါပဲ..လား။
ပြီးတော့…အချစ်ဆိုတာ.. ဒဏ်ရာ တစ်ခု…ပဲ..။
ဘယ်တော့မှ…..နာကျင်မှုတွေ ရပ်တန့် မသွားတဲ့ …ဒဏ်ရာ….
တစ်ရက်ထက် တစ်ရက်.ပို..ပို….ပြီး…နာကျင်လာမယ့် ..ဒဏ်ရာ…..
အဲဒီ ဒဏ်ရာ က…. နင့်ဆီမှာ…. ရနေပြီ..။
ပြီးတော့..ငါ့ဆီမှာလည်း…..ရ နေပါပြီ.. ကွာ…။
ကျွန်တော်သည်…. တစ်စုံတစ်ယောက် ကို..ချစ်မိဖို့ ..အလွန် ကြောက်သွားပါတော့သည် ။
တစ်စုံတစ်ယောက်၏ အချစ်ကို…ခံယူ ဖို့ ကို….
ပို၍ ပို၍ ကြောက်ရွံ့ …လာပါတော့သည်…။
စိတ်ကူးစိတ်သန်း နဲ့ ရသ၀တ္ထုတို အဖြစ်ကျစ်လစ်စွာရေးဖွဲ့တင်ပြပုံကို ခံစားမိပါ၏။
အချစ်ဝတ္ထုကို အမြင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ရေးဖွဲ့သွားလိုက်တာ ကောင်းပါ၏။ [:)]
(ကျွန်တော်သည် တစ်စုံတစ်ယောက် ကိုချစ်မိဖို့ အလွန် ကြောက်သွားပါတော့သည် ။
ထို့ အပြင်တစ်စုံတစ်ယောက်၏ အချစ်ကိုခံယူ ဖို့ ကိုပို၍ ပို၍ ကြောက်ရွံ့ လာပါတော့သည်။)
ဒါကြောင့် ပြောကြတာလေ ..
စာ ဖတ်ရတာလဲ ရှင်းတယ်။ ဖတ်သူကို တခါထဲ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်။ လူသတ်မှုအကြောင်းလေးကို စာဖတ်သူက တ၀က်လောက်တော့မှန်အောင်မှန်းဆနိုင်တယ်။ တ၀က်ကတော့ ဘာပါလိမ့်ပေါ့။
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်… ဆွဲဆောင်မှုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
သူငယ်ချင်းအပေါ် ထားတဲ့ သံယောဇဉ်လေးကို ဖတ်မိပြီး တုန်လှုပ်သွားမိတော့တယ် …. ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုး မဖြစ်ခဲ့သလို … အဲ့ဒီလို သဘောထားတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးလည်း ..အနားမှာ မရှိခဲ့ဖူးဘူး …….. ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွာတွေကများ တယ် … ဘ၀ကြီး ပွန်းပဲ့ခံပြီး သူငယ်ချင်းကို ကယ်တင်တာ … အားကျစရာကောင်းပေမယ့် …. နည်းလမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မသုံးသပ်ချင်ပါတယ် …. ။
ဒီအထဲမှာ .. မဖြစ်သင့်ဆုံး အချက်တစ်ခုလို့ မြင်တဲ့ … အကြောင်းရာတစ်ခု ကျွန်မတွေ့ခဲ့ပါတယ် …… ။ ဒါကတော့ ……. သွေး အဖြေကို ဆရာဝန်ကြီးက …ကာယကံရှင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကို ခေါ်တိုင်ပင်တာပါ … ။
သွေးအဖြေမပြောနဲ့ တခြားသော ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေဟာ ကွန်ဖီဒန်ရှယ်လ်မို့လို့ ….. တခြားသူကို ပေးသိခွင့်မရှိပါဘူး … ။ အခုလို HIV + ကူးခံရတာမျိုးဆို ပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ် …. ။ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်အရ …လူနာခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊ လူနာကလွဲလို့ တခြား လူကိုပြောခွင့်မရှိပါဘူး …. ။ မိဘ ၊ လင်ယောကျာ်း ၊ ဇနီးမယားနဲ့ သားသမီးတွေကြားမှာတောင် …. စည်းခြားထားရမယ့် အပိုင်းတစ်ခုပါ … ။ ဒါကြောင့်လည်း …. သွေးစစ်တဲ့နေရာတွေမှာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအားပေးတာတွေ လုပ်နေကြတာပါ … ကာယကံရှင်က ကိုယ့်သွေးအဖြေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ … ခံနိုင်ရယ်ရှိအောင် …. နှစ်သိမ့်တာတွေ အရင်လုပ်ကြတာပါ … ။ အတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းမို့လို့ …. ဒီကိစ္စခေါ်တိုင်ပင်တယ်ဆိုတာကတော့ ….. လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့ အပြူမူမျိုးပါ ။
HIV+ ဖြစ်နေလျှင်တောင်မှ … သူငယ်ချင်းကို တခြားသော နည်းနဲ့ … တားလို့ ရပါတယ် …. ။ ရောဂါသည်ရဲ့ ဘ၀ကို စာနာပြီးနွေးထွေးစွာဆက်ဆံမယ် ….. တဘက်က သူငယ်ချင်းကိုလည်း နားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုလျှင် … ကိုယ်လည်းထောင်ထဲမရောက်သလို …သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့လည်း သေကွဲ ၊ရှင်ကွဲ မခွဲရတော့ပါဘူး … ။ မသေမချင်း ထိုးသတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်မှာ သူမလည်း သွေးပြန်စစ်သင့်နေပါပြီ …။ လွင့်စင်လာမယ့်သွေးတွေ … သူမမှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရှိလျှင် ကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ပါ … ချက်ချင်းကြီးပြန်စစ်လျှင်တော့ အဖြေမပြသေးပေမယ့် .. .အချိန်ပိုင်းခြား တစ်ခုထိစောင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးမှ .. ပြန်စစ်လျှင် သူမမှာလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေရှိနေပါလိမ့်မယ် …. ။
အလင်းဆက်ရေ ..စိတ်ကူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ရေးသွားတဲ့ … ၀တ္တုတိုလေးမို့ နှစ်သက်မိပါတယ် … ။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ … ဇာတ်ပေါင်းခန်း မဖြစ်တော့ စာဖတ်သူ ဟက်ထိသွားတော့တယ် …. ။
ဒီပို့(စ်) လေးထဲမှာ ကိုလင်းအတွက်…
ဒီလိုပို့စ်တွေ ဖတ်ပြီးရင် အရမ်းခံစားရတယ် ကိုယ်အလင်းဆက်ရယ် နောက်ပို့စ်တစ်ခုတင်ရင် ချစ်သူတွေ ပေါင်းစည်းတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်ပြီးချစ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ရေးပါအုံးနော် ခုတော့ မျက်ရည်စလေးတွေ ကျသွားလို့ သုတ်လိုက်အုံးမယ် ။။။
ကိုအလင်းဆက်ရေ ၁၈ နှစ်သားတုန်းကရေးတာတောင်ဒီလောက်ကောင်းနေတယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ ..မမတုန်..ရေ..ကျွန်တော်..ဒီအချက်ကို….သတိ ထားမိပါတယ် ။
ကျွန်တော် က…. 18 နှစ်သားတုန်းက ရေး ထားတဲ့ စာမူလေးမို့ … ပြန်လည် ပြင်ဆင် တာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ..
ဒီအတိုင်း..ပဲ တင်လိုက်တာပါ ။
တကယ် တမ်းမှာ.. ဒီ ၀တ္ထုရဲ့ဇာတ်လမ်း.. ၊ ၀ါကျ တည်ဆောက်ပုံ နဲ့တင်ပြပုံ..ဟန် ..
ဘာကိုမှ မပြင်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ ဇာတ်ကောင် ပြောစကားတွေကိုလည်း…ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိပဲ..
မူလ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း တင်ပြ လိုက်တာပါ ။
မမတုန်..ထောက်ပြ သွားတာ မှန်ကန်ပါတယ် ။ အဲဒီ အချက်က လွဲ..နေတာ ပဲ..လေ.။ အမှန်ဆို..ကျွန်တော်..စကားလုံး..နောက်ထပ် ထပ် ထည့်ရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့်.. ထပ်ပြီး.ပြင်ဆင်တာ တွေ
မလုပ်ပဲ.. 18 နှစ်သား… စာ မရေးတတ်ရေးတတ်လေးနဲ့ ခံစားရေးထားတာလေးကို…ပဲ. ဒီအတိုင်း တင်ပြလိုက်တာလေ..။
အရမ်းမဟုတ်တောင် တော်တော်ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ
အစ်ကို ၁၈နှစ်တုန်းက ရေးတဲ့ ၀တ္ထုကို ခုကျနော် ၂၀အရွယ်မျာ ဖတ်ရတော့ ထပ်တူမဟုတ်တောင် အတော်လေး ထိမိစွာ ခံစားရပါတယ် ကျေးဇူးပါ အစ်ကို
ပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်း ရှိလို့ ဖတ်ရတာ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းနေပါတယ်။
ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီး
မျက်ရည်တွေ တောက်တောက်ကျတော့မယ် ဖြစ်ချိန်မှာ
မန်းဂေဇက်မှာ ဒီနေ့ ဂျစ်ပစီ ရေးတင်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု ကို ပြေးသတိရမိလို့ 
ဂျစ်ပစီ အတွက် ကြေငြာဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်
ညီငယ် အလင်းစက် အနေနဲ့ လဲ
လူ့ ဘဝကြီးထဲမှာ တကြော့ပြန် ဍကျပ်ဏ္ဍ/ဋဍဏ္ဍ(ဍဍxဍ ရပြီဆိုတာလေး
တိမ်ယံကို ဖတ်ရှု.နေတယ်.ဆိုလို့ ..၀မ်းသာရပါတယ် ။ကျေးဇူးလည်း.တင်ပါတယ်..ဗျာ.
တိမ်ယံကို ဖတ်တဲ့ သူ..နည်းတယ်..ထင်နေတာ ။ Hits တွေကလည်း…မပေါ်တော့…လေ..။
ကိုပေ..ရေ.. ဂျစ်ပစိ..ရဲ့ပိုစ် နဲ့တွဲ ဆက်ပြီး..ဖတ်ကြည့်မိပါပြီ..။ အညွှန်းလေးအတွက်..ကျေးကျေးပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ …ဘယ်တော့မှ ကို ဖတ်ပြီး..မျက်ရည် လည်..သွားတယ်..တဲ့လား.ကိုပေ..ရယ် ။
ဘယ်တော့မှ မရေးတော့ဘူးလို့..ဟိုတလောက… ဆုံးဖြတ်မိတဲ့ အချစ်ဝတ္တုတွေ… ထဲ..
ဒါမျိုးလည်း ပါတယ်.. ။